Waxyaabaha Badbaadinta Shakhsiyeed | Kaliya waa qayb kale oo laga helayo galoofyada PE / Latex / Nitrile / PVC
Hogaanka Alaabada Dhoofiye
Waxaan bixinaa adeeg hal-joogsi ah, boqolaal macaamiil ah ayaa nagu aaminay inaan siino alaab tayo sare leh
Warshadaynta Caadiga Ah Ayaa Jirta!
Waxyaabaha Badbaadinta Shakhsiyeed
Shirkada Unidus (HK) waxay siisaa wax soo saar tayo sare leh oo amaan ah qiime jaban. In alaabooyinka badbaadada laga dhigo kuwo la awoodi karo oo laga helo suuq ballaaran iyada oo aan tayada wax loo dhimin had iyo jeer waxay ahayd himilooyinkayaga. Alaabteenu si fudud ayey macaamiisha u heli karaan markasta oo loo baahdo, waa maxay jawiga shaqada ugu xun ee ay ku sugan yihiin.
Inbadan Soo Dhoof
Maaddaama aan nahay soo saaraha wax soo saarka badbaadada ee Shiinaha, waxaan bixinnaa xallinta amniga iyo xallinta caafimaadka si loo hagaajiyo amniga goobtaada shaqada. Tobanaan kun oo dad ah ayaa ku tiirsanaa alaabadayada si ay uga dhigaan goobtooda shaqada mid amni ah waxayna ka dhigaysaa macno ganacsi oo qumman.
Waxaan kaa caawineynaa inaanu hoos u dhigno qiimahaaga anaga oo ku siineyna qiimayaasha tartamaya alaabtayada. Waxaan ku siineynaa xalka ugu fiican si aan u isticmaalno alaabada saxda ah si aan u fulino shuruudaha macaamiishaada adigoon u baahneyn inaad qarash dheeraad ah ku bixiso iibsashada alaabada aan habooneyn
Acree waxay leedahay warshado wax soo saar leh oo ku yaal Shiinaha iyo shabakad ballaaran oo loo qaybiyo waddanka oo dhan. Waxaan bixinaa in ka badan 3000+ nooc oo ah qalab ilaalin shaqsiyeed (PPE) iyo qalab.
Marka amniga shaqaalaheena la hubiyo jawiga goobta shaqada, fursadaha wax soo saar kordha iyo waxtarkoodu wuu sarreeyaa. Shaqaalahaagu waxay dareemi doonaan kalsooni waxayna awood u yeelan doonaan inay diirada saaraan hawsha gacanta ku haysa halkii ay ka walwalin lahaayeen ammaankooda iyo fayoobaantooda inta ay shaqada ku jiraan.
In ka badan 10 sano oo khibrad ah soo saarista Qalabka Ilaalinta Shakhsiyeed (PPE), waxay ku soo saartaa nidaamyo tayo adag oo adag oo lagu caddeeyay ISO 9001: 2015 Standard. Waxyaabaha tayada leh ee loo aqoonsan yahay heerar caalami ah oo kala duwan oo ay taageerayaan Kooxda R & D ee Xoog leh si loo horumariyo joogtada ah ee Tayada Wax soo saarka
Waxaan uga jawaabi doonaa baaritaankaaga 24 saac gudahood. Waxaa taageeray koox khibrad u leh La-Taliyaha Amniga si ay u bixiyaan taageero farsamo oo fiican iyo kooxda Naqshadeynta Gudaha si ay kaaga caawiyaan qaabeynta alaabooyinka.
Ka hel waxa ugu fiican
Waxaan ku siineynaa xalka ugu fiican xagga nabadgelyada wax soo saar buuxa iyo adeegyo. Noo soo dhawaada si aan u helno maalgashiga ugu fiican si loo hubiyo jawi shaqo oo aan shil lahayn.
Isniinta-Jimcaha: 8: 00-18: 30 saac
(Telefoonka ilaa 17:30 saac)
Sabti - 8: 00-16: 00
Waxaan halkan joognaa
Xafiiska weyn: FLAT C, 9 / F, GURIGA GUUL, MAYA.72-76, WING LOK Street SHEUNG WAN, HONG KONG
Taleefan: + 86 512 56986025
Fakis: +86 512 58577588
Waxaan haynaa Jawaabo waawayn
Wax Na Weydii
Intee in le'eg ayaad sameysay alaabta PPE
Laga bilaabo soo saaraha ah galoofyada PE, ka dib markii in ka badan 10 sano horumarka, hadda waxaan ku siin in ka badan 30 nooc oo ah waxyaabaha PPE.
Miyaad aqbashaa OEM tiro yar oo amar ah
Haa, waan qaabeyn karnaa oo aan soosaari karnaa sida macaamiishu u baahan yihiin.Waxaan aqbalnaa OEM tiro yar, waxaan rajeyneynaa inaan si wadajir ah u horumarino ganacsiga.
Ma sameyn doontaa kormeer tayo leh ka hor shixnad kasta?
Haa, amar kasta, waxaan ku sameynaa kormeer habraacyada wax soo saar ee kala duwan, waxaanan lahaan doonnaa kooxdeena gaarka ah ee QA si aan u hubino tayada ka hor rarka.
Maxay tahay dammaanadda tayadaada ee dhammaan amarrada la bixiyo?
Waxaan uga jawaabi doonnaa cabashada macaamiisha 12 saacadood gudahood, annaguna waxaan mas'uul ka nahay dhammaan arrimaha tayada leh.
Waa maxay shuruudaha lacag bixintaadu?
Ku aqbal lacag bixinta T / T (Wareejinta Bangiga), L / C marka la eego (amarrada badan).
Maxaa ku saabsan waqtiga dhalmadaada?
Caadi ahaan waxaan ku dalbanaa amar cusub 30 maalmood gudahood, laakiin sidoo kale waxaan ku sameynaa amarka riixitaanka waqti gaaban.
Sideen ku heli karaa xigasho miisaaniyadeed?
Caadi ahaan waxaan ku siin karnaa saldhig dalab ah macluumaadka sida jaantuska cabbirka ama astaamaha wax soo saarka. Waxa kale oo laga yaabaa inaad ku hesho saldhig sicir ah sawir, fadlan la soco in marka xigasho sidan ah la bixiyo aan xaq u leenahay inaanu la jaanqaadno qiimaha haddii macluumaad aan la aqoon gadaal laga soo bandhigo.
Kawaran hadaanan ka heli waayo badeecada saxda ah ee aan ka raadinayo shabakadaada?
Waxaan dooneynaa inaan noqono ilahaaga dhameystiran ee alaabada PPE. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan bixinno xalal caawiya macaamiisheenna inay guuleystaan Acree sidoo kale waxay awood u leedahay inay gacan ka geysato horumarinta wax soo saarka PPE iyadoo la kaashanaysa adiga. Xaaladda dhifka ah ee aynaan ahayn isha ugu fiican, waxaan kaa caawin doonnaa inaan kuu tilmaamno jihada saxda ah.
Halkan waxaad ka heli doontaa macluumaadkayaga cusub iyo qiimaha
Xuquuqda daabacaadda 2012 - 2022 Acree | Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay | Powered by Acree
Baro sida aan uga caawinnay 100 magacood oo sare inay guuleystaan.